वाम तालमेलबाट कांग्रेस डराउनुपर्दैन :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
वाम तालमेलबाट कांग्रेस डराउनुपर्दैन
राधा घले, नेतृ, नेपाली कांग्रेस
दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय छिन् राधा घले । पञ्चायतको प्रतिबन्धित कालबाट राजनीतिमा लागेकी उनी यतिबेला आसन्न निर्वाचनमा निकै व्यस्त छिन् । दुई ठूला वाम घटकहरूको नेतृत्वमा वाम दलहरू एक ठाउँमा उभिएर निर्वाचनमा जाने तयारी गरेपछि उनको निर्वाचनको धपेडी झनै बढेको छ । नेतृ घलेसँग तरुणले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
० दुई कम्युनिस्टहरूले चुनावमा तालमेल गर्ने कुराले कांग्रेस आत्तिएको हो ?
– हामी आत्तिनुपर्ने कारण छैन । बरु कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावमा पराजित हुने डरले एक ठाउँमा उभिएका हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ । कांग्रेस एक्लै उनीहरूको मोर्चाबन्दीविरुद्ध लड्न तयार छ, हामी त्यसको तयारीमा छौं ।
० कांग्रेसलाई यो चुनावमा ठूलो धक्का लाग्छ भन्ने चर्चा छ नि?
– आवधिक निर्वाचनमा सधैं एउटै पार्टीले चुनाव जित्छ भन्ने हुँदैन, हार्न पनि सक्छ । हामी यतिबेला चुनाव हार्छाैं भनेर विचलित भएका छैनौं । बरु हामीलाई चिन्ता के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्दा कतै लोकतन्त्र त धरापमा पर्ने होइन ? यो मोर्चाबन्दी लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमजोर बनाएर देशमा एकदलीय अधिनायकवाद लाद्ने प्रपञ्च त होइन भनेर हामी चिन्तित भएका हौं ।
० दुई कम्युनिस्टबीच पार्टी एकीकरणसमेत गर्ने सहमति भइसकेको छ, अब कांग्रेसको भविष्य संकटमा परेको हो ?
– कांग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो । हिजो राणा, राजा अनि माओवादीको बन्दुकसँग पराजित नभएको शक्ति आज निहित सत्ता स्वार्थका लागि एक ठाउँमा भएका कम्युनिस्टहरूका कारण कांग्रेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कुरासँग म सहमत छैन । हुनसक्छ, यो तालमेलले हाम्रो सिट संख्या तलमाथि होला । तर कांग्रेस नै सकिन्छ भन्ने कुरा अफवाह हो । यसले त हामी लोकतन्त्रवादीलाई एकढिक्का हुन बल पु¥याएको छ ।
० कांग्रेस पार्टी मोर्चा जस्तो छ, कसरी अरु पार्टीसँग तालमेल हुन सक्ला ?
– हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौं । लोकतन्त्रभित्र आफ्ना विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । सोचमा फरकपन आउन सक्छ । कार्यशैली र व्यवहारले कोही कसैसंग नजिक वा टाढा हुन सक्छ । यसलाई मोर्चाबन्दी भन्नुहुन्न, अलग विचार भएका समूह भन्न सकिन्छ । लोकतन्त्रमा ती समूहको व्यवस्थापन हुन्छ । अहिले जसरी वाम गठबन्धन बन्यो, यो हाम्रा लागि चुनौती मात्र नभएर अवसर पनि बनेको छ । अहिले पार्टी एकढिक्का भएर अगाडि बढेको छ । हामीभित्र एकता भयो भने बाम गठबन्धन फिक्का हुन्छ । उनीहरूले आउँदो निर्वाचन परिणाम हेरेर बसुन्, सुनेर बसुन् । कांग्रेस नै पहिलो दल बन्छ ।
० पार्टीभित्र एकता देख्नुहुन्छ?
– हामी एउटै सिद्धान्त, विचार र आस्था भएका व्यक्तिहरू छौं । हामीले तीनवटा ठूला क्रान्ति हाँकेका छौं । कांग्रेसलाई कसैले कमजोर नठानोस्, ठान्नेहरू भ्रममा छन् ।
० चुनावमा नजिकिँदैछ, टिकट वितरणमा फेरि गुट नै हावी हुने होला ?
– यो गल्ती गरिनुहुन्न, जित्न सक्ने, इमान्दार र पार्टीप्रति प्रतिबद्ध व्यक्तिलाई टिकट दिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध जसरी मोर्चाबन्दी भएको छ, यसलाई परास्त गर्न हामीले जनाधार भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । गोजीबाट टिकट दिने र गुटलाई मलजल हुने काम पार्टी नेतृत्वले बन्द गरोस् ।
० तपाईको इच्छा के छ नि?
– म २०३६ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा छु । तरुण दलको वडाको एकाइ अध्यक्षदेखि केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेरसमेत काम गरिसकेकी छु । विगतमा भएका दुईवटै संविधानसभा निर्वाचनमा म समानुपातिक उम्मेदवार हुँ । तर अवसर पाइएको छैन । त्यसकारण मैले यसपटक प्रदेशतर्फ प्रत्यक्षमा लड्ने चाहना राखेकी छु ।
० पार्टीले टिकट देला त?
– मैले यसपटक काठमाडौं क्षेत्र नंम्बर ४ को प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ नै उम्मेदवारी दावी गरेकी थिएँ । तर क्षेत्रका साथीहरूले मलाई प्रदेशमै उठ्न सुझाव दिए । क्षेत्र र जिल्लाले मलाई क्षेत्र नं. ४ को प्रदेशतर्फ १ मा मेरो नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ । पार्टी संगठनभित्र होस् या अन्तरपार्टी सञ्जालदेखि सामाजिक कार्यमा समेत उत्तिकै सक्रिय भएका कारण पार्टीले टिकट दिनेमा म विश्वस्त छु ।
० राजनीतिमा कसरी आउनु भयो ?
– मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि राजनीति नै हो । मेरो हजुरबुबा ठूलो जमिन्दार हुनुहुन्थ्यो । बुबा २००७ सालको राजनीतिक क्रान्तिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । बीपीसँग उत्तिकै निकट भएर काम गर्नुभयो बुबाले । २०३६ सालतिर सिन्धुलीमा बीपीसँग बुबाले मलाइ भेटाउनुभएको थियो । बीपीले हात मिलाउनुभयो । त्यतिबेला म १०–१२ वर्षकी थिएँ । बीपीका बारेमा थाहा थिएन । पछि जब बीपीलाई फाँसी दिनुपर्ने भन्दै पञ्चहरू बोल्थे र त्यो कुरा रेडियोबाट सुन्दा बुबा रुनु हुन्थ्यो । अनि मैले सोध्दा बीपीबारे बुबाले धेरै कुरा भनेपछि मलाई बीपी, नेपाली कांग्रेसप्रति धेरै झुकाव बढ्थ्यो । यो घटनाले पनि मलाई राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गरेको हो ।
० महिलालाई राजनीतिमा निरन्तरता दिन कत्तिको सहज छ ?
– बिहे भएपछि निकै गाह्रो भयो । बिहे गरेर आएपछि घरमा राजनीतिको ‘र’ पनि सुन्न नचाहने परिवार थियो । छोराछोरी भएपछि उनीहरूलाई हुर्काउनै प¥यो, अर्थात् पारिवारिक व्यस्तता बढ्यो । तर सानैमा बीपी चिने, गणेशमान सिंह चिन्ने अवसर पाएँ, उहाँका कार्यक्रममा जान थालें, मेरो सक्रियता बढ्दै गयो । घरव्यवहार पनि सम्हाल्दै राजनीतिमा सक्रिय हुँदै आएँ ।
० राजनीतिबाहेक अरु कुनै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ ?
– सामाजिक काममा संलग्न छु । म खगेन्द्र नवजीवन केन्द्रको आजीवन सदस्य हुँ । पारा ओलम्पिकको सदस्य छु । यस्ता विभिन्न समाजिक संस्थामा म सक्रिय छु ।
Tarun Khabar0response मंगलबार,२४ आश्विन २०७४ 1299 Views